एमाले सरकारले गरेको भ्रष्टचारको भण्डाफोर गर्नु नै मेरो जित्ने आधार हो - SindhuKhabar
गृहपृष्ठ ∕ राजनीति ∕ एमाले सरकारले गरेको भ्रष्टचारको भण्डाफोर गर्नु नै मेरो जित्ने आधार हो
एमाले सरकारले गरेको भ्रष्टचारको भण्डाफोर गर्नु नै मेरो जित्ने आधार हो
सिन्धु खबर मंगलबार, २०७९ वैशाख २७ / १९:५७
भक्तध्वज बोहोरा नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिकाका अध्यक्षका उम्मेदवार हुन् । यसअघि २०७४ को स्थानीय निर्वाचनमा पनि उनी त्रिपुरासुन्दरीबाटै अध्यक्षको उम्मेदवार बनेका थिए । उनी त्यतिबेला झिना मतान्तरले नेकपा एमालेका उम्मेदवार भुपेन्द्र श्रेष्ठसँग पराजित भएका थिए । बोहोरा दोस्रो पटक उम्मेदवार बनेका छन्। उनीसँग २०७४को निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धी बनेको भुपेन्द अहिले नेपाली कांग्रेसमानै आबद्ध छन् ।
तपाइको जित्ने आधार के हो ?
यसअघिका एमालेको सरकारले केही काम गर्न सकेन भ्रष्टाचारमा लिप्त भयो । आज त्यही पार्टीको नेता, गाउँपालिका अधयक्षलाई नै गाइड गर्ने नेता चुनावी प्रतिस्पर्धामा हुनुहुन्छ । यदि उहाँ यहाँको भ्रष्ट्रचार र अनियमिततासँग संलग्न हुनुहुन्थ्यो भने सही ढंगले गाइड गर्नुपर्दथ्यो । उहाँले अहिले हाम्रो पार्टीमा प्रवेश गर्नुभएको छ भुपेन्द्र श्रेष्ठजी उहाँलाई खराब भन्दै गर्दाखेरि त्यसको दोषको भागीदार उहाँ पनि हो । त्यो कुरालाई हामीले जनताको बीचमा लगेका छौं । जनताले पनि एकपटक हामी युवालाई अवसर दिन्छौं भनेका छन् । एमालेको उम्मेदबार माधव पौडेल दुई दुई पटक जिल्ला विकासको सदस्य पनि बन्नुभयो । दुई दुई कार्यकाल सदस्य भएर सिन्को पनि भाँच्नु भएको छैन् । अनि उहाँलाई ३० वर्ष पछाडि गाउँपालिकाकै ढुकुटी जिम्मा लगाउने हो भने उहाँले के गर्न सक्नुहोला ? त्यो एउटा संशयको विषय बनेको छ । त्यसैले पनि हामी जित्छौं जनता उत्साही भएर लागिरहेका छन् । उहाँचाहि आफ्नो ठाउँहरुमा हाम्रो साथीहरुलाई अवरोध गर्ने गरेर हारको मानसिकताबाट ग्रसित भएर बस्नुभएको छ ।
उम्मेदवार किन बन्नुभयो ?
म अघिल्लो चुनावमा झिनो मतले पराजित भए । निरन्तर रुपमा मैले पार्टीका एजेण्डा, विकासका एजेण्डा जनताका जनताको जनजिविकाका एजेण्डा निरन्तर रुमा उठाएर सिगों गाउँ पालिकामा सधैभरि लागिरहेको मान्छे हुँ । जनताको बीचमा लोकप्रिय छु, यही नै हुन सक्छ भनेर मलाईपार्टीले उम्मेदवार बनाएको हो ।
स्थाीयन तहमा जित्नुभयो भने सुधार गर्न के के एजेण्डा बनाउनुभाछ ?
पारदर्शिता सबैभन्दा ठूलो कुरा हो । विकास र सुशासन हाम्रो मुख्य एजेण्डा हो । शिक्षामा चामत्कारिक सुधार गर्न जरुरी देखिएको छ । त्यो हामी गर्छौ । जस्तै स्वास्थ्यमा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गर्छौ र स्वास्थ्य निशुल्क गर्छौ । स्वास्थ्य सूचना उपलबध गराउन त्यस्तै खालका प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छौं । पर्यटन प्रवर्धनका लागि धार्मिक पर्यटन विकासको क्षेत्रमा उल्लेखनीय काम गर्छौ । त्यसको माध्यमबाट रोजगारी अभिवृद्धि गर्छौ । नागरिकलाई उद्यमशील बनाउन काम गर्छौ । अनि किसानहरुmाई फल बिउबिजन विषादीलगायतका कुराहरुको अभाव भइरहेको छ त्यो अभाव हुन दिँदैनौ । किसानहरुले उत्पादन गरेका फसलहरु हामी सिँचाइसहित सबै कुराहरु दिएर उत्पादन गरेका उपजहरुलाई टोल बस्ती नजिक एक मेकानिजम बनाएर खरिद गर्छौ । हामीले यस्तै जनताका मुद्दाहरु उठाएका कारण पनि हामी जनतामाझ लोकपिय छौं । अर्को कुरा कुरीबाट कालिन्चोकसम्म केबलकार बनेको छ । घोर्थलीबाट कुरीसम्म जाने मोटरबाटो पनि निर्माण भइसकेको छ । त्यसको स्तरोन्नति गर्छौ । लाटुको लट्टेश्वर मन्दिरबाट कालिन्चोक भगवतीसम्म जाने लाटुदेखि कुरीसम्मको केबलकार जोड्ने योजना हामीले अगाडि सारेका छौ । त्यसलाई कार्याल्वयन गर्छौँ । त्यस्तै विधलय स्तरको खेलकुदकोलाई प्राथमिकता दिँदै ५ वर्षभित्र जिल्लाकै उतकृष्ठ युवा खेलाडीहरुके उत्पादन गर्दै व्वयसायिक खेलाडी उत्पादन गर्छौ ।
क्याटेगोरी : राजनीति, विचार/अन्तरवार्ता